Manafatra hetra | Ny fanafarana ny fiarako
Nanazava ny hetra fanafarana
Afaka manampy amin'ny dingana manontolo izahay, fa raha te hamaky bebe kokoa momba ny hetra mety ho hetra ianao rehefa voasoratra ao Royaume-Uni ny fiaranao, dia vakio.
Ao amin'ny EU ve ny fiaranao? Raha mitondra fiara faharoa any UK ianao avy ao anatin'ny EU dia tsy maintsy mandoa VAT ianao raha tsy mitondra ny fiara any Angletera amin'ny alàlan'ny tetika ToR. Tsy mila mandoa adidy ianao, ary ho an'ny fiara, mihoatra ny telopolo taona ny singa VAT dia ahena ho 5%. Talohan'ny Brexit dia nisy ny fivezivezena malalaka ny entana, saingy tsy azo ampiharina izany satria nandao ny Vondrona Eoropeanina i Royaume-Uni tamin'ny Janoary 2021. Midika izany fa ny fiara rehetra tonga dia iharan'ny lalàna momba ny hetra izay tsy tafiditra ao anatin'ny EU. Raha mifindra any UK ianao ary te hitondra ny fiaranao dia tsy mila mandoa haba na VAT ianao. Raha tsy azonao antoka raha mahafeno fepetra ho an'ny fanampiana ToR ianao dia aza misalasala maka teny nalaina ary hanome anao fampahalalana bebe kokoa izahay. Ahoana ny amin'ny brexit? Inona ny drafitra ToR?
Inona koa no mila fantatrao? Raha manafatra fiara avy any ivelan'ny Vondrona Eoropeana (EU) izay naorina ivelan'ny Vondrona Eoropeana ianao, dia takiana handoa 10% ny haba fanafarana sy 20% VAT mba hamoahana azy avy amin'ny ladoany UK. Izany dia kajy amin'ny vola nividiananao ny fiara tany amin'ny firenena nanafarana azy.
Raha manafatra fiara avy any ivelan'ny Vondrona Eoropeana izay naorina tany amin'ny Vondrona Eoropeana ohatra ny Porsche 911 naorina tany Stuttgart, Alemaina. Tsy maintsy mandoa taham-pahefan'ny adidy ianao izay £ 50 ary avy eo 20% VAT mba hamotsorana azy amin'ny ladoany UK.
Raha mahazatra ny fiara, dia mety tsy handoa hetra ianao. Fa mba makà quote mba hanomezanay hevitra marina momba ny fiaranao manokana.